समाज Archives - Page5of 572 - खबरमञ्च खबरमञ्च
You are here: Home > समाज - Page 5
By खबर मञ्च / January 12, 2019 / समाज / Comments Off on कस्तो छ माइ मेलाको सुरक्षा योजना ?
भद्रपुर । माघे संक्रान्तिको अवसरमा कनकाई नगरपालिकास्थित कनकाई (माई) नदी किनारमा लाग्ने तीन दिने माइबेनी मेलालाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित बनाउन सुरक्षा योजना तयार गरिएको छ। पुस ३० देखि माघ २ सम्म सञ्चालन हुने धार्मिक मेलामा आउने भक्तजन र सहभागीहरुको सुरक्षाका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले स्थानीय तह, मेला सञ्चालन समिति, स्थानीय क्लब र धार्मिक संघसंस्थाहरुसँग समन्वय […]
By खबर मञ्च / January 12, 2019 / समाज, स्वास्थ्य / Comments Off on डा. केसीसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन
काठमाडौ। डा गोविन्द केसीसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै सोलिडारिटी फर डा केसी एलाइन्सले माइतीघरमा प्रदर्शन गरिएको छ । १६ औँ अनसन बसेका डा. केसीसँग गरिएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आज उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन । सरकारले विगतमा गरेको सहमति अनुसार नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुनुपर्ने माग राख्दै इलाम पुगेर अनसन बसेका डा. […]
By खबर मञ्च / January 12, 2019 / राजनीति, समाज / Comments Off on नेकपाका नेता भरतमोहन अधिकारी अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका नेता भरतमोहन अधिकारी अस्पताल भर्ना भएका छन् । छातीमा संक्रमण देखिएपछि ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित मेडिसिटी अस्पतालमा गत सोमबार भर्ना गरिएको उनका स्वकीयसचिव महेन्द्र विष्टले जानकारी दिए । चिसोले गर्दा अधिकारीको छातीमा संक्रमण भएको उनले बताए । पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका अधिकारीलाई शुक्रबारदेखि स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि सामान्य बेडमा सारिएको छ । ८३ वर्षीय अधिकारीलाई […]
By खबर मञ्च / January 11, 2019 / समाज / Comments Off on झापाको विर्तामोडमा यसरी मनाइयो राष्ट्रिय एकता दिवस
बिर्तामोड । विभिन्न साना राज्यहरुको एकीकरणबाट नेपाल राष्ट्र निर्माण भएको स्मरणमा शुक्रबार झापाको बिर्तामोडमा फरकरुपमा राष्ट्रिय दिवस मनाइयो । पछिल्लो पुस्तासहित आम नागरिकमा राष्ट्रभक्तिको भाव जागृत गराउन गणतन्त्र स्थापनापछि पहिलोपटक सामाजिक संस्थाले सार्वजनिक रुपमा सबै पार्टीका नेता उपस्थित गराइ राष्ट्रिय दिवस मनाएको हो । वीरता जेसीजको अगुवाईमा विभिन्न संघ–संस्थाको सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा न कुनै भाषण […]
By खबर मञ्च / January 11, 2019 / समाज / Comments Off on बिषालु घाँस खाँदा १२ बाख्रा मरे
गलेश्वर । म्याग्दी जिल्लाको रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ घुमाउनेतालमा विषालु घाँस खाएर स्थानीयवासी अनिल शाहीका १२ वटा बाख्रा मरेका छन् । चरन क्षेत्रबाट गोठमा फर्किएका बाख्रा बिहीबार गोठमै मरेको अवस्थामा भेटिएका थिए । व्यावसायिक बाख्रापालन गरिरहेका स्थानीय कृषक शाहीका अनुसार चरन क्षेत्रबाट ल्याएपछि घाँस नखाने, झोक्रिनेजस्ता लक्षण देखिएको थियो । गोठभित्र धमाधम बाख्रा मर्न थालेपछि कृषक शाहीले […]
By खबर मञ्च / January 10, 2019 / समाज / Comments Off on प्रधानसेनापति थापाले शुक्रबारदेखि ६ दिने भारत भ्रमण गर्ने
काठमाडौं । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले भोलि (शुक्रबार)देखि ६ दिने भारत भ्रमण गर्ने भएका छन् । प्रधानसेनापति पदमा नियुक्त भएपछि पहिलोपटक उनी आफ्ना भारतीय समकक्षी स्थल सेनाध्यक्ष जनरल विपीन रावतको औपचारिक निमन्त्रणामा त्यसतर्फ प्रस्थान गर्न लागेका हुन् । भ्रमणकाक्रममा प्रधानसेनापति थापालाई भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले भारतीय स्थल सेनाको मानार्थ महारथी दर्जाको दर्ज्यानी चिह्नबाट पुस २८ गते […]